Application Demo -
Indiko Biochemistry Analyzer Demonstration
1. Precision & Accuracy ကောင်းတဲ့
2. Reagent Stability ကောင်းတဲ့
3. After Sales Service ကောင်းတဲ့
4. LIS Software FOC တပ်ဆင်ပေးတဲ့
5. ငွေအလုံးအရင်း ရင်းနှီးစရာမလိုပဲ စက်ငှားပြီး သက်သာစွာအသုံးပြုနိုင်တဲ့
Biochemistry Analyzer ရှိချင်ပါလျှင် Delta Science ကိုသာ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ.
Delta Science က တင်သွင်းတဲ့ USA အခြေစိုက် Thermo Fisher Scientific Inc., Indiko & Indiko Plus Clinical Chemistry Analyzer ကိုရွေးချယ်အသုံးပြုပေးတဲ့ အတွက်ရော Interview လုပ်ပေးတဲ့ အတွက်ရော Thinzar Zaw / Ma Thinzar Zaw Min Aye (B.Med.Tech), Lab In-Charge, Latha Laboratory, အားကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင့်
𝗤𝗔/𝗤𝗖, 𝗔𝗰𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗰 𝗧𝗲𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗻𝗱 𝗣𝗵𝗮𝗿𝗺𝗮𝗰𝗲𝘂𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝘆 တွေမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သော 𝗙𝗧-𝗜𝗥 𝗦𝗽𝗲𝗰𝘁𝗿𝗼𝗺𝗲𝘁𝗲𝗿 ၏အသုံးပြုပုံများအား 𝗗𝗲𝗺𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 ပြသခြင်း။
𝗙𝗧-𝗜𝗥 𝗦𝗽𝗲𝗰𝘁𝗿𝗼𝗺𝗲𝘁𝗲𝗿 သည်....
* 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗲𝘁 𝗦𝘂𝗺𝗺𝗶𝘁 𝗣𝗿𝗼 𝗙𝗧-𝗜𝗥 𝗦𝗽𝗲𝗰𝘁𝗿𝗼𝗺𝗲𝘁𝗲𝗿 နှင့်အတူ 𝗘𝘃𝗲𝗿𝗲𝘀𝘁 𝗗𝗶𝗮𝗺𝗼𝗻𝗱 𝗔𝗧𝗥 𝗔𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝘆 အားတွဲဖက်အသုံးပြုထားသောကြောင့် မိမိတို့၏ 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗹𝗲 များကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြင့်တိုက်ရိုက်တိုင်းတာပေးနိုင်ခြင်း၊
* 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗲𝘁 𝗦𝘂𝗺𝗺𝗶𝘁 𝗣𝗿𝗼 𝗙𝗧-𝗜𝗥 𝗦𝗽𝗲𝗰𝘁𝗿𝗼𝗺𝗲𝘁𝗲𝗿 နှင့်တွဲဖက်အသုံပြုမည့် 𝗢𝗠𝗡𝗜𝗖 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗱𝗶𝗴𝗺 𝗦𝗼𝗳𝘁𝘄𝗮𝗿𝗲 ကိုအသုံးပြုရာတွင်လည်းလွယ်ကူမူရှိတဲ့အပြင် 𝗦𝗼𝗳𝘁𝘄𝗮𝗿𝗲 ထဲတွင် 𝗦𝗽𝗲𝗰𝘁𝗿𝗮𝗹 𝗟𝗶𝗯𝗿𝗮𝗿𝘆 𝟭𝟬,𝟬𝟬𝟬 ကျော်ပါဝင်သောကြောင့် မိမိတို့၏ 𝗨𝗻𝗸𝗻𝗼𝘄𝗻 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗹𝗲 များကို 𝗟𝗶𝗯𝗿𝗮𝗿𝘆 ဖြင့်နိူင်းယှဉ်၍ 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗹𝗲 𝗗𝗮𝘁𝗮 ထဲတွင်ပါဝင်သည့် 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻𝘁𝘀 များကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန် အဖြေထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း၊
* 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗲𝘁 𝗦𝘂𝗺𝗺𝗶𝘁 𝗣𝗿𝗼 𝗙𝗧-𝗜𝗥 𝗦𝗽𝗲𝗰𝘁𝗿𝗼𝗺𝗲𝘁𝗲𝗿 စက်ထဲတွင် 𝗙𝘂𝗹𝗹𝘆 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝘁𝗲𝗱 𝗪𝗶𝗻𝗱𝗼𝘄 𝟭𝟬 𝗖𝗼𝗺𝗽𝘂𝘁𝗲𝗿 ပါဝင်သောကြောင့် 𝗟𝗮𝗽𝘁𝗼𝗽 သီးသန်ထားရှိရန်မလိုအပ်တော့ပါ ထို့အပြင် 𝗠𝘂𝗹𝘁𝗶-𝗖𝗼𝗹𝗼𝗿𝗲𝗱 𝗟𝗘𝗗 𝗟𝗶𝗴𝗵𝘁𝗕𝗮𝗿 ပါဝင်သောကြောင့် 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗹𝗲 𝗔𝗻𝗮𝗹𝘆𝘀𝗶𝘀 လုပ်ရာတွင်ဖြစ်ပေါ်လာသောအခြေအနေများနှင့်စက်၏အခြေအနေများအား အရောင်များဖြင့်ခွဲခြားပြသပေးနိူင်ခြင်း၊
* 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗲𝘁 𝗦𝘂𝗺𝗺𝗶𝘁 𝗣𝗿𝗼 𝗙𝗧-𝗜𝗥 𝗦𝗽𝗲𝗰𝘁𝗿𝗼𝗺𝗲𝘁𝗲𝗿 သည် 𝗣𝗼𝗿𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁 ဖြစ်သောကြောင့် အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာနေရာများသို့ အလွယ်တကူပြောင်းရွေ့အသုံးပြုနိူင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
စသည်ဖြင့်....အသုံးပြုသူများအတွက်လည်း 𝗥𝗶𝘀𝗸𝘀 အနည်းဆုံး၊ 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗧𝗶𝗺𝗲 အနည်းဆုံး၊ 𝗥𝘂𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗧𝗶𝗺𝗲 အနည်းဆုံးနှင့် အကောင်းမွန်ဆုံး 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗹𝗲 𝗗𝗮𝘁𝗮 များကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရရှိနိုင်အောင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ 𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗲𝘁 𝗦𝘂𝗺𝗺𝗶𝘁 𝗣𝗿𝗼 𝗙𝗧-𝗜𝗥 𝗦𝗽𝗲𝗰𝘁𝗿𝗼𝗺𝗲𝘁𝗲𝗿 𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼 လေးကိုဆက်လက်ကြည့်ရူလိုက်ကြပါစို......
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက 𝐃𝐞𝐥𝐭𝐚 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐨., 𝐋𝐭𝐝 ၏ 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 𝐏𝐚𝐠𝐞 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫 မှလည်းကောင်း၊ 𝗗𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗦𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 ၏ 𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲 တွင်လည်းကောင်း အောက်ဖော်ပြပါဖုန်းနံပါတ်များသို့လည်းကောင်း အောက်ဖော်ပြပါဖုန်းနံပါတ်များသို့လည်းကောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်.......
#𝗡𝗶𝗰𝗼𝗹𝗲𝘁 𝗦𝘂𝗺𝗺𝗶𝘁 𝗣𝗿𝗼 𝗙𝗧-𝗜𝗥 𝗦𝗽𝗲𝗰𝘁𝗿𝗼𝗺𝗲𝘁𝗲𝗿
#𝗘𝘃𝗲𝗿𝗲𝘀𝘁 𝗗𝗶𝗮𝗺𝗼𝗻𝗱 𝗔𝗧𝗥
#𝗢𝗠𝗡𝗜𝗖 𝗣𝗮𝗿𝗮𝗱𝗶𝗴𝗺 𝗦𝗼𝗳𝘁𝘄𝗮𝗿𝗲
ယနေ့ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဖြစ်ပွား နေသော COVID-19 ရောဂါပိုး ရှိ၊မရှိ ကို အချိန် နှင့် တပြေးညီ တိကျ သေချာ စွာ ရှာဖွေ စစ်ဆေးနိုင်သော ကမ္ဘာ့ အသိအမှတ်ပြု နည်းပညာ တစ်ခု ဖြစ်သည့် Real-Time PCR System
အခြားသောဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုများစွာကိုလည်း လွယ်ကူ လျင်မြန်တိကျစွာ ရှာဖွေ စစ်ဆေးနိုင်ပြီး မတူညီသော Temperature ၆ ခု ကို တပြိုက်နက်တည်း Set လုပ် လို့ ရမှာ ဖြစ်သည့် အတွက်ကြောင့်
PCR Annealing Step အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း
မိမိ၏ Testing Data Results များကို လိုအပ်သလို Export ထုတ်ယူနိုင်သည့်အပြင် Cloud Access ပါ ရှိသောကြောင့် Internet ရရှိ ရုံဖြင့် မည့်သည့် နေရာ ဒေသ မှ မဆို အလွယ် တကူ ထုတ်ယူ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
အသုံးပြုသူများအတွက် လွယ်ကူလျင်မြန်ပြီးအတိကျဆုံးနှင့် အကောင်းမွန်ဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်များကို လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သော Quantstudio-5 Real Time PCR Sytem ၏ လုပ်ဆောင် ပုံ များကို
ကြည့်ရှု လိုက်ကြရအောင်လား ခင်ဗျာ..
#Just the right everything
indiko Demonstration Video
Delta Science က တင်သွင်းတဲ့ USA အခြေစိုက် Thermo Fisher Scientific Inc., Indiko & Indiko Plus Clinical Chemistry Analyzer ကိုရွေးချယ်အသုံးပြုနေသော Thinzar Zaw / Ma Thinzar Zaw Min Aye (B.Med.Tech), Lab In-Charge, Latha Laboratory, က စက်၏ အသုံးပြုပုံအကြမ်းအား ရှင်းလင်းပြသပေးနေသော Demonstration Video ဖြစ်ပါသည်။